Newtek NDI Apk Download ho an'ny Android [Update 2022]
Te hampiasa ny fakantsarinao Android Smartphone amin'ny streaming mivantana ianao? Raha eny dia eto amin'ity rindrambaiko Android mahavariana fantatra amin'ny anarana hoe Newtek NDI Apk ity izahay, izay manolotra fotsiny hampifandray ny fakantsarinao Android Smartphone amin'ny streaming mivantana ary hampandeha azy ho webcam.
Araka ny fantatrao fa amin'izao andro izao, ny streamers mivantana dia mampiasa fakan-tsary marobe mba hahatonga ny streaming ho manintona sy miavaka kokoa. Youtubers sy streamer hafa dia mampiasa ity fampiharana ity amin'ny streaming. Mila mampifandray fotsiny ny fitaovanao amin'ny alalan'ity fampiharana ity ianao mba hidirana amin'ireo endri-javatra ireo.
Araka ny fantatrao dia misy rindranasa hafa, izay misy eny an-tsena. Saingy ireo fampiharana rehetra ireo dia manolotra fiasa feno karama. Ka nitondra ity rindrambaiko ity izahay, izay manome maimaimpoana ireo serivisy rehetra ireo. Tsy mila mandany denaria tokana ianao vao ampiasaina.
Betsaka ireo fiasa hafa izay hozarainay aminao ao amin'ilay faritra eto ambany. Noho izany, mijanona miaraka aminay vetivety fotsiny ary hizara izany rehetra izany izahay. Raha hampiasa an'ity rindranasa ity ianao, dia tokony handalo ity famerenana ity. Hizara fiasa vitsivitsy izahay izay hanampy anao hahafantatra momba ity app ity.
Topimaso momba ny Newtek NDI Apk
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'i Newtek. Io no rindrambaiko farany indrindra, izay manolotra anao hampiasa ny fitaovana Android ho webcam. Manolotra fiasa samihafa azonao ampiasaina amin'ny streaming ianao. Hanintona kokoa ny streaming anao io.
Araka ny fantatrao, ny streaming mivantana dia iray amin'ireo zavatra be mpitia indrindra amin'ny Internet. Ny olona erak'izao tontolo izao dia mampiasa azy io mba hahazoana vola amin'ny alàlan'ny fandefasana horonantsary mivantana sy zavatra hafa. Ny fampiasana an'ity fampiharana ity dia hampitombo ny fijerinao mivantana sy mpanaraka anao koa.
Manolotra fanovana samihafa ihany koa izy io raha mandefa mivantana, izay mahasarika kokoa ny horonan-tsary ary mampitombo ny fomba fijery. Hizara ireo fanovana fanovana izahay, izay azonao ampiasaina mandritra ny fandefasana karazana video.
Manolotra anao hifehezana ireo fananana zooming izy, amin'izay ahafahanao mifantoka amin'ny atiny lehibe ary hanazava azy kokoa amin'ny mpijery.
Io dia ahafahan'ny jiro jiro ao amin'ny fitaovanao Android, ahafahanao mandefa tsy misy hazavan'ny andro.
Azonao atao ihany koa ny mifehy ny fampiratiana amin'ny tanana. Izy io dia manolotra ambaratonga samihafa amin'ny lafiny tsara ary koa amin'ny ratsy. Ilainao fotsiny ny mametraka ny fampiratiana mety araka ny zava-misy.
Manolotra fanohanana am-peo ihany koa izy io, ahafahanao mifehy ny feon'ny fitaovanao. Azonao atao ny mamelona sy mamono azy amin'ny fotoana rehetra.
Manolotra takelaka iray ahafahanao mitantana ny toeran'ny fakantsary fakantsarinao Android.
Misy endri-javatra betsaka kokoa misy, azonao zahana amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity ianao dia afaka mifandray aminao amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
anarana Newtek NDI Apk
Anaran'ny fonosana com.newtek.ndicamera
Endri-javatra lehibe an'ny Newtek NDI App
Raha miresaka ny sasany amin'ireo fiasa ao amin'ireo fehintsoratra etsy ambony isika, saingy mbola misy zavatra hafa tokony hanazavana. Noho izany, hizara lisitra tsotra amin'ireo fiasa lehibe izahay. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra.
Endri-javatra Easy Access
Ahoana ny fampidinana ny Newtek NDI Apk?
Raha te-hisintona an'ity rindranasa ity dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao eto amin'ity pejy ity. Ho hita eo an-tampon'ny sy ity pejy ity izy io. Tsindrio izany ary andraso segondra vitsy, ny fisintomana dia hanomboka ho azy ao anatin'ny segondra.
Newtek NDI Apk no fampiharana tsara indrindra ho an'ny streamer Live, izay manolotra azy ireo hampiasa ny fitaovana Android ho fakan-tsary hafa amin'ilay renirano ary hahasarika azy kokoa. Mitsidika hatrany ny Website ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Apps, Photography Tags Newtek NDI, Newtek NDI Apk, Newtek NDI App Post Fikarohana
Airpin Pro Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Fampidinana fampiharana YSR Cheyutha ho an'ny Android [Vaovao 2022]